Ogaden News Agency (ONA) – Taliska Wayaanaha oo Eedeeyay Booliiska Gumaysiga Sababta.
Taliska Wayaanaha oo Eedeeyay Booliiska Gumaysiga Sababta.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in taliska wayaanuhu uu eedayn culus u xanbaariyay ciidanka Booliiska ee wayaanaha, sida xogta aan kuhelayno kooxda TPLF ayaa shiki wayn kaqaaday ciidamada Booliiska Wayaanaha kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay mashquul ku ahaa ka hortaga kacdoonada kooxda TPLF lagaga soo horjeedo.
Xogtan oo aan kahelay ilo wareedyo ku dhaw taliska wayaanaha ayaa sheegaya in ciidanka Booliiska lagu eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen kacdoonkii shaqo iyo socod joojinta ahaa ee shacabka Oromadu ay todobaadkan kujireen.
Taliska wayaanaha amar kubixiyay in xabsiga ladhigo saraakiil iyo ciidan katirsan ciidamada Booliiska Wayaanaha, kuwaas oo sida uu talisku sheegay garab wayn siiyay kacdoon wadayaasha qoomiyada Oromada, wuxuuna taliska wayaanuhu sheegay in uu cadaymo u hayo garab siinta shacabka ee Booliiska.
Xubno sheegay in ay makhraati kayihiin sheegashada taliska wayaanaha ayaa maxkamada ciidamada wayaanaha ka horsheegay in ay makhraati kayihiin xubno Booliiska katirsan oo dadwaynaha ku amrayay n ay guryahooda isku reebaan isla markaana udiidanaa baabuurtu in ay socdaan.
Sidoo kale xubnahan makhraatiga ah ayaa sheegay in ay Booliisku dadka u hanjabayeen iyagoo kulahaa dowlad majirto sharcina majiro ee guryihiina kujira, waxayna sheegeen in ay garanayaan qaar kamid ah booliiska magacyadooda iyo wajiyadooda.
Ciidanka gumaysiga Itoobiya iyo guud ahaan taliska wayaanaha ayaa aad ukala shakisan waxaadna arkaysaa ciidamada oo qabiil qabiil iyo Gobol Gobol ukala fadhiya.